Mkpa mmanụ dị mkpa maka Melasma - Osimiri Dị Mkpa | AromaEasy
Ihe na July 28, 2020 July 6, 2021 by Aromaeasy
Nke a bụ ntuziaka dị mkpirikpi nke AromaEasy na mmanụ dị mkpa maka ịgwọ ọrịa melasma.
Melasma, ihe gbasara ụcha akpụkpọ ahụ na-eme ka ọ dị njọ na olu, ubu na ihu. Na melasma bụ naanị otu n'ime ọnọdụ anụ ahụ na-eme kwa ụbọchị. Mana enweghị nchekasị, enwere ọtụtụ nhọrọ maka ọgwụgwọ maka ọnọdụ anụ ahụ.
A na-eche mmanụ dị mkpa iji belata nsogbu akpụkpọ. Mmanụ dị mkpa na-emekwa nke ọma maka okwu melasma. Na post a, anyị na-ekwu maka ihe ịkwesịrị ịma banyere mmanụ dị mkpa maka melasma.
Osisi kacha mma dị mkpa maka ọgwụgwọ Melasma
Tii Osisi Mkpa mmanụ
Na benzoyl peroxide acid, osisi tii dị mkpa mmanụ Echere na ọ ga - enyere aka ịgwọ ọrịa akpụkpọ ahụ dị ka melasma na patị gbara ọchịchịrị. Osisi tii nwere ike inye aka kpochapụ ndị ahụ gbara ọchịchịrị, ma kwalite mgbake anụ ahụ. Ọ kacha arụ ọrụ mgbe mpaghara gbara ọchịchịrị na-achọ ịpụta. Itinye tii mmanụ mmanụ dị mkpa nwere ike bụrụ ezigbo uru iji mee ka akụkụ ahụ ahụ dịkwuo mma.
Frankincense Mkpa mmanụ
Na njikwa antibacterial na mgbochi mkpali, frankincense dị mkpa mmanụ bụ mmanụ bara uru maka melasma. Na mgbakwunye, mmanụ a dị mkpa nwere ike imeghari uto nke mkpụrụ ndụ ọhụrụ na anụ ahụ. Nke a bụ ya mere mmanụ frankincense dị mkpa ji nwee ikere òkè na ọgwụgwọ nke melasma. N'ihi na Frankincense nwere ike inye aka belata patches gbara ọchịchịrị nke melasma kpatara.
Mmanụ Eucalyptus Dị Mkpa
Ị nwere ike ịchọta eucalyptus mmanụ dị mkpa dika ihe eji edozi otutu nma. Enwere ike ibute nke a ọtụtụ ihe, gụnyere ịdabere ntụkwasị obi na ndozi anụ ahụ. Eucalyptus dị mkpa mmanụ jupụtara antioxidants bara ụba. Ọ nwere ike inye aka belata nchacha na oghere na-egbu anụ gị. Yabụ, mmanụ dị mkpa a na - enyere aka na ịlụ ọgụ megide melasma.
Lavender Mkpa mmanụ
Ọ nwere ike bụrụ ihe dị ịtụnanya ịhụ lavender nọ na ndepụta a. Otutu mmadu na - acho ima banyere lavender n'ihi isi oku ya. E wezụga iji ya maka ọgwụ aromatherapy na ịhịa aka n'ahụ, na-enye mmanụ dị mkpa na-enyere aka melite udiri akpụkpọ ahụ.
MARA: Were mmanu mmanu di nkpa jiri mmanu kpochie tupu I choo iji ha.
Osisi ndị ọzọ maka Melasma Alleviation
Mmanụ nke grapeseed nwere ihe nwere ọgwụ antioxidant a na-akpọ proanthocyanidin. Mgbe ejiri akpụkpọ ahụ gị mee ihe mgbe niile, antioxidant a nwere ike wepu akpụkpọ ahụ. Ighapu mmanu mmanu na-egosi na belata ihe mgbaàmà nke melasma, hyperpigmentation nke anụahụ.
Mmanụ aki oyibo nwere ihe dị ka ọdụdụ acid, lauric acid, na vitamin nke nwere ike inye uru ahụ. Mgbe etinyere ozugbo na mpaghara melasma, mmanụ aki oyibo nwere ike inye aka belata ụcha akpụkpọ ahụ na mineral ndị a.
Mmanụ Ala Dị Mkpa
Anyị na-ewepụta mmanụ dị mkpa n’akụkụ dị iche iche nke ahịhịa dị iche iche. Site na iji myriad, mmanụ ndị dị mkpa dị mkpa maka ndị ahịa niile.
Nnyocha ụfọdụ egosila na ụfọdụ mmanụ nwere ike inye aka na ọgwụgwọ nke nsogbu anụ ahụ, gụnyere ọgwụgwọ melasma. Ọ bụ ezie na nsonaazụ nke ọmụmụ ndị izizi a yiri ka ọ ga-ekwe nkwa, a ka nwere ọtụtụ ndị ọrụ amaghị maka mmanụ dị mkpa maka melasma. N'ikwu eziokwu, ọtụtụ n'ime 'ihe mmụta sayensị' ị hụrụ maka ọgwụgwọ ndị a na-arụ ọrụ ka na-adịgide adịgide.
Na mgbakwunye, mmanụ ndị e si n’osisi wepụta pụrụ inye mmadụ ọgwụgwọ meziri emezi ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ị nwere ike dochie ọgwụgwọ ahụike nke nsogbu melasma na mmanụ dị mkpa.
Etu esi agwọ Melasma nke Ọma?
Thezọ kachasị mma iji kpochapụ melasma bụ site na ọgwụgwọ ọgwụ, ebe a bụ ụfọdụ ndụmọdụ:
Gbasoo usoro nchekwa UV ka ị na-ahụ kwa ụbọchị iji anwụ anwụ.
Yiri akwa mkpuchi UV iji gbochie melasma gị ka ọ ghara ịka njọ.
Zere ịpụgharị anyanwụ n'oge awa kachasị elu (elekere 10 nke abalị - 2 nke ehihie)
Gakwuru dọkịta gị maka ọkachamara, ọgwụgwọ usoro emebere maka mkpa gị. Iji mmanụ dị mkpa maka melasma ga-abụ mgbakwunye a pụrụ ịdabere na ya maka ọgwụgwọ mgbe ị jụsịrị dọkịta.
Mkpa mmanụ dị mkpa iji kwụsị ịokingụ sịga
Otu echiche na “Mmanụ dị mkpa maka Melasma"
Ana Lourdes de Souza ekwu, sị:
April 6, 2021 na 12: 06 am